SAMOTALIS: ‘BOQOL CISHO, BOQOL WAX QABAD IYO DHEERAAD’
Balan-qaadkii Xukuumadda ee Boqolka Maalmood ee ugu Horeeya:
3) In amar lagu siiyo Xisaabiyaha guud iyo Gudoomiyaha Baanka Dhexe in aanay bixin wax lacag ah oo dhaaf siisan mushaharka Shaqaalaha, Raashinka Ciidamada, Cisbitaalada, Agoomaha iyo Shidaalka.
8) In la dayactiro lana dhamaystiro Terminalka 2aad ee Magaaladda Berbera
Tirsiga Waxa La fuliyey
1. A) Arrimaha Amniga:-
2 Waxaa la kala diray Guddigii Nabadgelyada ee dadka ku xukumi jirtay awood aan Sharci ahayn, waxaana saamaxaad Madaxweyne lagu sii daayey Maxaabiistii siyaasadeed ee ku xidhnaa amarkooda.
3 Waxaa la dardar geliyey dhamaystirka xabsiga dhexe ee Hargaysa oo uu haatan dhismihiisu gabo gabo marayo.
4 Madaxwaynuhu waxa uu soo saray baaq nabadeed oo ku wajahan gobollada Sool iyo Sanaag bari Khudbadiisii ugu horeysay.
1. Waxaa la xakameeyey in aanay muddada kala guurka ee xilka lala kala wareegayo iyo maalmaha xigta toona aanay dhicin Musuqmaasuq iyo Hanti lunsi, isla markaana waxaa la amray Xisaabiyaha Guud iyo Gudoomiyaha Baanka Dhexe in aanay bixin lacag ka baxsan Mushaharka shaqaalaha, Raashinka Ciidamada, Cisbitaalada, agoomaha iyo Shidaalaka, Waxaana la sameeyey Guddi daba-gasha Amarkan Madaxweynaha.
3 Waxaa la bixiyey deyntii Mushaarka Shaqaalaha iyo Ciidamada oo dhamayd muddo 5 bilood.
4 Waxaa la bilaabay oo hawsheedu socotaa Waddada isku xidha Dilla/Boorama oo ah ilaa 4KM.
5 Waxaa la abuuray markii ugu horeysay Komiishanka La dagaalanka Musuqmaasuqa.
6 Waxaa la dhisay oo la hawl geliyey ha’yadda Dhawrista Tayada (Quality Control Agency)
2 Waxaa la kordhiyey oo la dhaqangeliyey saacadaha shaqada, iyadoo haatan la shaqeeyo min 7:00 ilaa 2:00.
3 Waxaa la dhiiri geliyey Barnaamijka Iskaa wax u qabso, si dadweynuhu uga qayb qaataan dib u dhiska dalka, kaasoo suurto geliyey in magaalooyinka waaweyn laga sameeyo Jidad laami ah.
D Arrimaha Sharciga
1 Waxaa la abuuray Hay’adda Dib u habaynta Shuruucda.
E Siyaasadda Arrimaha Debedda
1 Waxa uu madaxweynaha JSL, Mudane, Axmed Maxamed Silanyo, safar ku tegay Jamhuuriyadda Jabuuti oo madaxweynaha iyo wefdigiisa ku soo dhoweysay maqaamkii ugu sareeyay abid ee Somaliland kala kulanto caalamka, Socdaalkaas oo madaxweynuhu kasoo hooyey guulo la taaban karo, waxaanu madaxweynuhu safar kaas la mid ah ku tegayaa Dalka Ethiopia ee aan deriska nahay iyo Kenya oo uu marti qaadyo ka helay.
2 Waxaa la diyaariyey qoraalo cadaynaya qadiyadda Somaliland iyo Siyaasadda Dawladda Cusub, kuwaas oo loo kala diray ururada ay ka mid yihiin EGAD, Arab LEAGUE, Islamic LEAGU, Qaramada midoobay, iyo ururada kale ee Caalamiga ah.
Isugaynta Kharashka aanu bixinay 100 Cisho. 102,909,871,370
? Kawaanka Gowraca Laascaanood oo ay ku baxday $137,440
? Sariibadda Laascaanood. $140,114
Isla markaas waxa kale oo aanu isbedel ku sameynay Shuruucda Wasaaradda Maaliyadda kuwaas oo aanu si dakhso ah u keeni doono Golaha Wasiiradda si loogu gudbiyo Golaha Wakiiladda, meelaha kale ee aanu wax ka toosinay waxa ka mid ah waxaanu qabanay tababar la xidhiidha Nidaamka Sameynta Miisaaniyadda oo heer caalami ah kaas oo aanu u qabanay Agaasimayaasha Guud, Gudoomiyayaasha Hay’addaha Dawladda, Agaasimayaasha Waaxyaha Maamulka iyo Agaasimayaasha Waaxyaha Qorshaynta kaas oo wax weyn ka badali doona Habka loo Maamulo Miisaaniyadaha iyo qaabka loo Maamulo, waxa kale oo aanu sameynay Buug tilmaamaya Qorshaha Sadexda Sanno ee Miisaaniyadda (Medium Term Fiscal Frame Work), kaas oo ku tallo galkeedu yahay inaanu ku hagno Miisaaniyadda 3 Sanno ee soo socda.”